မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ | Mya Kyun Thar isanewly founded Meditation Centre headed by Venerable Dr. Ashin Parami. It is situated in the Yadanarkyun Ward, Thunandar Road, North Okkala, Yangon, Myanmar. It follows the technique of Mogoke Sayadaw Phayargyi, an eminent meditation master in 1960s. | Page 9
မိုးကုတ်ဆရာတော် ဖတ်တော်မူသည့် စာအုပ်များနှင့် အသုံးပြုတော်မူခဲ့သော ပန်းကန်ခွက်ယောက်များ မိုးကုတ်ဆရာတော် ထိုင်တော်မူခဲ့သည့် ထိုင်ခုံများ
သမုဒယ-ကို သံ + ဥ + အယ- လို့ ပုဒ်ခွဲလိုက်လျှင် သံ-က ပေါင်းစု၍။ ဥ-က ဖြစ်တာ။ အယ-က အကြောင်းတရား။ ပေါင်းစု၍ ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းတရားဟာ သမုဒယပါပဲ။ သစ္စာ-က အမှန်တရား။ ဒါကြောင့် သမုဒယသစ္စာ-ဆိုတာ ပေါင်းစု၍ ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်း အမှန်တရား လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်းအလို- တဏှာ သမုဒယော ဘဝေ။ တဏှာဟာ သမုဒယသစ္စာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဓမ္မစက္ကပ၀တ္တနသုတ္တန်အလို ကာမတဏှာ၊ ဘ၀တဏှာ၊ ၀ိဘ၀တဏှာ ဆိုတဲ့ တဏှာသုံးပါးဟာ သမုဒယသစ္စာပါပဲ။ ကာမဂုဏ်ငါးပါးကို သာယာတဲ့တဏှာက ကာမတဏှာ၊ ဖြစ်နေတဲ့ဘ၀အပေါ်မှာ သာယာတဲ့ တဏှာက ဘ၀တဏှာ။ ဘ၀ပြတ်စဲတာ ဘ၀မရှိမှ အေးမယ်လို့ ထင်ပြီး ဘ၀ပြတ်စဲမှုအပေါ်မှာ သာယာတဲ့ တဏှာက ၀ိဘ၀တဏှာပါပဲ။ ကာမဂုဏ်အာရုံငါးပါးအပေါ်မှာ သာယာတော့ ကာမတဏှာဖြစ်တယ်။ […]
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အိပ်ခန်းနှင့် အသုံးအဆောင်များ
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ကျိန်းစက်စဉ် အသုံးပြုတော်မူခဲ့သည့် ခုဋင် မွေ့ယာ ခြင်ထောင် စောင်ခေါင်းအုန်းများ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ထည့်ထားသည့် သေတ္တာ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် မိုးကုတ်မြို့ ဖောင်တော်ဦးဘုရားဝင်းအတွင်းရှိ မင်္ဂလာတိုက်ကျောင်းတွင် သီတင်းသုံးတော်မူခဲ့ပြီး ဆရာတော်သီတင်းသုံးတော်မူခသည့် အိပ်ခန်းကို မူလလက်ရာမပျက် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလျက်ရှိရာ မိုးကုတ်မြို့သို့ ရောက်ခိုက် ၀င်ရောက် ဖူးမြော် ကြည်ညိုကန်တော့ရင်း အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အင်တာနက်စပိဒ် နှေးကွေးသဖြင့် တစ်ပုံ နှစ်ပုံချင်းဆက်လက်၍ အဆက်မပြတ် ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။ ဒေါက်တာအရှင်ပါရမီ
မိုးကုတ်ဆရာတော် တရားအားထုတ်ခဲ့သည့် ဂူ
This is the sacred place where the respected Mogoke Sayadaw made an effort for his actual meditation practice and the attainment of arahat-ship. It is situated in Bowbadan village at Mogoke. (Not Myanmar fonts properly available; so mention this in English, be patient with it).
ကျေးဇူးတော်ရှင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီ၏ တရားဌာန မြကျွန်းသာ မိုးကုတ်ရိပ်သာ (တရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ် ပြန့်ပွားရေးဌာန) ရတနာကျွန်းရိပ်သာ၊ သုနန္ဒာလမ်းမကြီး၊ (ဋ) ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဖုန်း – ၀၀၉၅-၁-၆၉၁၅၅၃ နေ့စဉ် အာစိဏ္ဏကံ ယောဂီများအတွက် နေ့ပိုင်း (၁း၃၀)နာရီမှ (၂း၃၀)နာရီအထိ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အသံတိပ်ခွေကိုနာကြားရမှာ ဖြစ်ပြီး ညနေ (၃း၀၀)နာရီမှ (၄း၀၀)နာရီအထိ တရားထိုင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားထိုင်လိုသူ မည်သူမဆို လာရောက် တရားထိုင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း နေ့ (၁း၃၀)နာရီမှ (၂း၃၀)နာရီအထိ တရားတော်များကို မိုးကုတ်နယ်လှည့်ဓမ္မကထိကတစ်ပါးပါးက ဟောကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဥပုသ်နေ့တိုင်းတွင် နံနက် (၉း၃၀) နာရီမှ (၁၀း၃၀)နာရီအထိ သီလပေးတရားဟောကြားလျက် နေ့ (၁း၃၀)နာရီမှ (၂း၃၀)နာရီအထိ သစ္စာတရားတော်များကို ဟောကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်။ မည်သူမဆို သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း တရားနာယူနိုင်ကြစေရန်နှင့် တရားအားထုတ်နိုင်ကြစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ […]